Dagaal yahanada Daalibaan oo weerarey magaalada Sangins ee gobolka HELMAND. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Dhacdoyinka Caalamka Dagaal yahanada Daalibaan oo weerarey magaalada Sangins ee gobolka HELMAND.
Ururka Taliban ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa maanta weerar ku qaaday saldhiga booliiska magaalada muhiimka ah ee Sangins, sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Afgaanistaan.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya cida gacanta ku haysa maammulka degmada Sangins oo ku taalla gobolka Helmand, iyadoo guddoomiyaha gobolkaas & booliisku ay beeniyeen wararka ururka Daalibaan ee sheegaya inay degmada maamulkeeda la wareegeen.
Magaalada Sangin ayaa waxaa marar hore oo badan gacanta ku dhintay ururka Daalibaan, iyadoo dagaalladii ka dhacay ay sababeen waxyeelooyin badan oo soo gaaray ciidamada dalka Afgaanistaan iyo kuwa caalamiga ah ee dalkaas ku sugan.
Sidoo kale, Daalibaan ayaa Isniintii weerartay meel ku dhow saldhigga Bagram oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee Afgaanistaan ku sugan, iyagoo ku dilay lix askari oo Maraykan ah.
Weerarkan ayaa ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee lagu qaado ciidanka shisheeyaha ah ee dalkaas ku sugan, inkastoo dowladda Mareykanka ay xustay In weerarka lagu dliay askarteeda uu ahaa qarax.
Dhanka kale, saddex gantaal ayaa lagu riday magaalada Kabul ee caasimadda Afgaanistaan isla habeenimadii Isniintii shalay, inkastoo aan weli si rasmi ah loo sheegin khasaaraha ay sababeen gantaalladan iyo halka ay ku dhaceen.
Ugu dambeyn, Afgaanistaan ayaa la geeyay 12,000 oo Askari oo shisheeye ah, kuwaasoo qayb ka ah xulafada caalamiga ah ee ay NATO hoggaaminayso si ay u xoojiyaan ciidanka dalka Afghanistan oo dagaallo kula jira ururro Islaami ah.
Previous articleAmnesty oo ciidamada dalka Burundi ku eedeysey in ay dad shacab ah u laayeen si bareer ah.
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo mamnuucdey in qabto xaflado loogu dabaal degayo sanadka milaadiga.